Dufanka Oral Turinabol (Oral Tbol) (2446-23-3) ≥98% | Budada AASraw
/ Products / Anterolics steroids / Taxanaha budada ah ee testosterone / Foornada Turinabol (Oral Tbol)
SKU: 2446-23-3. Categories: Taxanaha budada ah ee testosterone, Anterolics steroids
Oral Turinabol (Oral Tbol) video budada ah
Dufanka afka Turinabol (Oral Tbol) Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Dufanka afka Turinabol (Oral Tbol)
Formula kelli: C22H50
Miisaankani waa: 314.63200
Color: Ka fur budada cad
Oral Turinabol (Oral Tbol) isticmaalka budada ee wareegga steroids
Dufanka Oral Tembaha ah (budada afka Turinabol) Magacyada
Budada afka Turinabol waxaa sidoo kale loo yaqaannaa budada Oral Tbol (CAS 2446-23-3), OT, iwm.
Dufanka afka laga qaato (budada afka Turinabol) Isticmaal
Turinabol afka waa caadi ahaan isticmaalka afka. Ragga, caadi ahaan 15mg-40mg maalintii, ma jiraan wax ka badan todobaadyo XNUM; Dumarka, caadi ahaan 8-2.5mg maalintii, wax ka badan toddobaadka 5.
ORAL T-BOL waa la sameeyay kaddib markii danabol. Oral t ballaaran wuxuu u ogolaanayaa horumar weyn oo aan keenin sii-haynta biyaha sida danabol. Hawlgalku waa mid yar, laakiin guulaha waa mid deggan. Diyaargarowga anabolic waa mid gaar ah si ay u dhaliso wax soo saarka dabiiciga ah ee testosterone, xaqiiqda ah in user ee dhamaadka daaweynta leeyahay heer sare ah ee cajiinka dabiiciga ah. U soo jeeda in ay sii wadaan horumarinta murqaha muruqyada muddada dheer.
Chlorodehydromethyltestosterone, magac guud oo loogu talagalay nooca caanka ah ee loo yaqaan 'Oral Turinabol', waa dheef xoog leh oo Dianabol ah. Astaankan afka ah wuxuu ka kooban yahay iskudhis methandrostenolone iyo clustebol (4-chlorotestosterone), oo leh qaab isku mid ah sida Dianabol oo leh xNUMX-chloro isbedelka clustebol. Isbedelkan wuxuu keenaa chlorodehydromethyltestosterone a-da-adeer ilmo-yar oo Dianabol, steroofo cusub oo aan muujineynin estrogenic iyo waxqabadyo badan oo ka sii yar oo ka soo jeeda marka la barbardhigo miisaankeeda caanka ah. Dhaqdhaqaaqa anabolic ee chlorodehydromethyltestosterone wax yar ayuu ka hooseeyaa Dianabol sidoo kale, laakiin waxa uu ilaaliyaa dheelitirnaan waxtar badan oo anabolic ah oo saameyn ku yeesha orrogenic. Tani macnaheedu waa in heer kasta oo laqoonsado waxqabadka muruqyada, chlorodehydromethyltestosterone ayaa u badnaan doonta in ay soo saarto saameynaha ifrogenic.
Qiyaasta daaweynta ee caadiga ah ee Oral Turinabol ayaa lagu qiyaasaa in uu yahay XMUMX mg maalintii; Tilmaamaha dhabta ah ee qorista ayaa aan la heli karin. Qeybta ciyaaraha fudud, qiyaasta daaweynta maalinlaha ah ee firfircoon waxay ku dhacdaa xaddiga 5-15 mg, oo lagu qaato wareegyada wareegyada oo aan ka badnayn todobaadyada 40-6 si loo yareeyo hepatotoxicity. Heerkani wuxuu ku filan yahay kororka la qiyaasi karo ee muruqa cufan iyo xoog. Wakiilkan waxaa badanaa loo adeegsadaa sida tartan ama horudhac steroid ah ujeedooyin jirka ah, loomana arko inuu yahay wakiil sare oo xajmi ah sababtoo ah la'aanta estrogenicity. Ciyaaraha cayaaraha oo ah xawaareyntu waxay tahay mid muhiim u ah chlorodehydromethyltestosterone, waxay heleysaa faa'iido xoog leh oo anabolic ah iyada oo aan loo baahnayn in la mariyo biyo dheeraad ah ama miisaan dufan.
Qiyaasta daaweynta ee caadiga ah ee Oral Turinabol waxaa lagu qiyaasaa mg 1-2.5 maalintii; Tilmaamaha dhabta ah ee qorista ayaa aan la heli karin. Haweenka cayaaraha fudud, haweenku waxay caadi ahaan qaadan doonaan hal kiniini 5 kiniin ah maalin kasta, oo lagu qaato wareegyada wareegyada oo aan ka badnayn todobaadyada 4-6 si loo yareeyo hepatotoxicity. Waxyeellooyinka saamaynta lagama yaabo inay u badnaato heerkan isticmaalka. Qiyaaso badan ayaa loo isticmaalay ciyaaryahannada gabdhaha ee barnaamijkii hore ee GOP, laakiin badanaaba waxaa loo isticmaalaa waxyeelo soo noqnoqonaysa.
Nolosha nuska ah ee suugaanta sayniska ka dib markii maamulka IV uu yahay saacadaha 16; Si kastaba ha ahaatee, nolosha afku waa mid aan aheyn mid isku mid ah. Guud ahaan nolosha nuska ah ee maamulka afka waa ka dheer yahay maamulka IV, si kastaba ha ahaatee, kiiskan waxaa laga yaabaa in uu gaaban yahay sababtoo ah metabolismka ugu horeeya iyo hoos u dhaca heerka maskaxda oo la yareeyey marka loo eego qiyaasta IVXXXUMX. Warqad kale waxay soo jeedineysaa nafaqo-dhimis aan caadi ahayn. Qiyaasta wanaagsani waa ugu yaraan siddeed saacadood oo loogu talagalay badhkii nolosha steroidkan oo leh qiimaha saxda ah ee u dhaxeeya saacadaha 1 iyo 1. Xaqiiqda ah in metabolitis of steroid this la ogaan karaa waqti dheer ka dib joojinta ku doodayaa in muddo ah nolosha-badhkii2.
Isticmaalayaasha ayaa soo sheegay in cadaadiska adag ee adag ee heerarka testosterone dabiiciga ah marka la isticmaalo Oral Turinabol. Steroidkani waa beerka sunta ah laakiin waxay u badan tahay in waxoogaa ka badan oo sun ah ay ka badan tahay xaddiga siman ee methandrostenolone. Astaankan waxaa si fiican loo yaqaanaa doorka uu ka leeyahay barnaamijka doping-ka ee barnaamijka doping-ka ee barnaamijka doping oogu hore ee jarmalka. Daawadan ayaa la siiyay ciyaaro rag iyo dumar ah si gaar ah si kor loogu qaado waxqabadka ciyaaraha fudud ee Olombikada. In kasta oo ragga la daaweeyay, haweenku waxay ahaayeen kuwo diiradda saarey, sababtoo ah waxay ka jawaabayeen wax ka sii fiican daaweynta. Qiyaaso 10 oo kaliya XMUMX mg maalintii ayaa soo saaray kordhay waxqabadka haweenka. Barnaamijkan waxa kale oo ku jiray daroogooyinka kale sida mestanolone, qaabka 20-beta hydroxy ee Oral Turinabol, 11-chloro-methylanestoneone, 4-chloro-mestanolone, methandrostenolone, testosterone iyo nandrolone esters iyo waliba qaar kiciyeyaasha iyo hormoonada hormoonnada ah. Xitaa sidaa daraadeed, Oral Turinabol wuxuu ahaa diiradda, sababtoo ah waxay u muuqatay in ay soo sheegto natiijooyinka ugu fiican4.
Oral Turinabol wuxuu muujiyay sanadihii ugu dambeeyay suuqa dambe ee dadka oo isticmaalaya xaddiga 100 mg maalintii. Qaadashadan, mid waa in la isweydiiyo haddii sheyga uu ku jiro steroid sax ah ama uu ku hoos jiro ama haddii ay tahay kiis kale oo "ka sii fiican".
Digniin ku saabsan budada afka laga qaato (CAS 2446-23-3)
Dhibaatooyinka soo raaca ee oral Turinabol waa qaar ka mid ah kuwa ugu sahlan ee steroid anabolic ee dhulka. Si kastaba ha ahaatee, waxaan sidoo kale ogaan doonaa in ay yeelan karto saameyn xoog leh oo saameyn xun ku leh caafimaadka wadnaha. Tani waa inay noqotaa mid loo xakameyn karo dadka qaangaarka ah ee caafimaad leh laakiin waxay noqon doontaa wax aad u baahan tahay inaad isha ku hayso. Ragga iyo haweenkuba waxay awoodi doonaan inay isticmaalaan steroidkaan.
Saameynnada lidka ah (Androgenic)
Inkasta oo chlorodehydromethyltestosterone lagu sifeeyo sida anabolic steroid, saameynaha iyo istrogen-yada ayaa weli suurtagal ah walaxdan. Kuwaas waxaa ka mid noqon kara maqaarka madow, finanka, iyo koritaanka timaha jirka / wajiga. Qiyaaso ka sarreeya sida caadiga ah waxay u badan tahay inay keenaan saameynaha kale. Cudurka anabolic / androgenic steroids ayaa sidoo kale sii xumayn kara caadada malabka timaha. Dumarka waxaa sidoo kale looga digay saameynta saameynta firfircoon ee steroids anabolic / androgenic. Kuwaas waxaa ku jiri kara qoto dheer oo ah codka, caadada caadada ah, isbeddel ku dhaca maqaarka maqaarka, koritaanka timaha wajiga, iyo ballaarinta clit. Chlorodehydromethyltestosterone ma aha mid si xeeldheer u dheehantahay 5-alpha reductase enzyme, sidaa daraadeed xajmiga xajmiga ah ee isugeyntu si weyn looma beddelo iyadoo la isticmaalayo finasteride ama dutasteride
Saameynnada Laga Helo (Hepatotoxicity)
Chlorodehydromethyltestosterone waa unug c17-alpha alkylated. Isbeddeladani waxay ka ilaalisaa daroogada inay ka joojiso beerka, taas oo u oggolaanaysa boqolkiiba sagaashan sare ee daroogada gelitaanka dhiigga ka dib markii maamulka afka laga qaato. Caabuqyada anabolic / androgenic-ka ee C17-alpha ayaa laga yaabaa inay noqoto hepatotoksik. Baaxad aad u dheer ama aad u sarreeya waxay keeni kartaa dhaawac beerka. Marar dhif ah waxaa dhici karta in xaalad nolol-halis galin karta. Waxaa lagugula talinayaa inaad booqato takhtar si joogto ah inta lagu jiro wareeg kasta si loo kormeero shaqada beerka iyo caafimaadka guud. Qaadashada steroids c17-alpha alterated steroids badanaa waxay ku kooban tahay usbuucyada 6-8, si loo ilaaliyo culeyska beerka. Isticmaalka dheeraadka ah ee beerka ka-soo-saarka sida "Stabil", Liv-52, ama Essentiale Forte ayaa lagula talinayaa inta la qaadanayo steroids anabolic hepatotoxic.
Saameynnada Lahaanshaha (Cardiovascular)
Cudurrada anabolic / androgenic steroids waxay yeelan karaan saameyn xun oo ku dhaca kolesteroolka. Tani waxaa ka mid ah in la yareeyo qiimaha "kolesterol" (HDL) wanaagsan iyo kor u qaadista qiimaha LDL (xun), taas oo beddeli karta HDL-ta LDL dheelitirka jihada taasoo dhiiri gelisa halista ugu badan ee arteriosclerosis. Saameynta qiyaasta ah ee stabto-anabolic / androgenic-ka ah ee ku salaysnayd neefsashadu waxay ku xiran tahay qiyaasta, dariiqa maamulka (afka iyo cirbadda), nooca steroid (aromatizable or non-aromatizable), iyo heerka iska caabinta ee metabolism hepatic. Chlorodehydromethyltestosterone waxay saameyn xooggan ku leedahay maareynta cagaarshowga ee kolestaroolka sababtoo ah dabeecad aan sifuddheer lahayn, caabbinta qaabdhismeedka beerka, iyo dariiqa maamulka. Cudurrada anabolic / androgenic steroids waxay sidoo kale si xun u saameyn kartaa cadaadiska dhiigga iyo triglycerides, yareeyo nasinta dareenka, iyo taageerida hypertrophy-ka baxa, oo dhamaantood sii kordhaya khatarta cudurrada wadnaha iyo miyir-qaadka.
Si loo yareeyo cadaadiska wadnaha, waxaa lagula talinayaa in lagu sii wado barnaamijka jimicsiga wadnaha iyo in la yareeyo qaadashada dufanka buuxa, kolestaroolka, iyo carbohydrateska fudud mar walba inta lagu jiro xilliga firfircoonaanta AAS. Kordhinta saliidda kalluunka (gram 4 maalintii) iyo caanaha caadiga ah ee cholesterol / antioxidant sida Lipid Stabil ama badeeco leh maaddooyinka la barbardhigay ayaa sidoo kale lagula talinayaa.
Saameynada Waxyeellada (Tijaabada Hore)
Dhammaan daawooyinka anabolic / androgenic steroid marka la qaato qiyaaso ku filan si kor loogu qaado faa'iidada murqaha ayaa la filayaa inay xakameyso wax soo saarka testosterone endogenous. Haddii aan laga helin walxaha walxaha kiciya, testosterone waa in ay caadi ahaan ku soo noqdaan gudaha 1-4 bilaha ah ee daroogada. Ogsoonow in hypogonadotrophic hypogonadism sii kordhin karto xadgudubka labaad, si loo sameeyo faragelinta caafimaadka.
Foornooyinka afka laga qaato
Haddii aan su'aal ka keenin saameynta Turol Turinabol waxay noqon doontaa mid aad u qiimo badan ciyaartoyda iyo ciyaartoyda ciyaaraha fudud waxaan ula jeednaa ciyaaraha fudud. Kama hadleyno jirdhiska jirka ama dareeraha jimicsiga ee ku nool sida kan kaliya laakiin halkii uu ku tartamayo cayaar tartan ee xirfad jireed. Isticmaalka Turbada Turinabol waxay si weyn u horumarinaysaa dulqaadashada murqaha, ma daalin doonaan sida ugu dhakhsaha badan, heerka guud ee raysashada waa in si weyn loo hagaajiyo.
Dufanka afka Turinabol (CAS 2446-23-3)
Suuq-geynta Shirkada Afka ah ee Afka
Sida loo iibsado budada afka turinabol (CAS 2446-23-3); iibso budada afka laga qaato ee 'AASraw'
AASraw waxay bixisaa nadiif ah 99% Daawad dhirta 'turinabol' ah oo loo yaqaan 'bodybuilders' ama shayaalka dhulka hoostiisa ah ee isticmaalka afka.
Oral turinabol Roodhida meydka:
XADGUDUB DHALINYARADA (HALKAN KA HELI KARTAA DAKHLIGA)
5ML ee PS80
Budada 1gram (winny, anavar, dbol, OT, iwm.)
1ML Daahfashka biyaha lagu nadiifiyo
43ML Biyaha la soo saaray
orals ayaa sidoo kale ku qaban doona diiradda:
Budada 2.5grams (winny, anavar, dbol, OT, iwm)